Abantu abasi-8 babulawa kungquzulwano kwikonsathi yehip-hop yaseHouston
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Abantu abasi-8 babulawa kungquzulwano kwikonsathi yehip-hop yaseHouston
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • inkcubeko • ukonwatyiswa • Iindaba zeMpilo • umculo • iindaba • abantu • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Abantu abasi-8 babulawa kungquzulwano kwikonsathi yehip-hop yaseHouston.
Imiba yokhuseleko ibingumba oxhalabisayo nangaphambi kokuba uqalise umsitho. Imithombo yeendaba yalapha ekhaya yaxela ukuba abantu abaninzi banyathelwa emva kokuba amakhulu ehlasele ibala lezemidlalo i-NRG, etyhala imiqobo yokhuseleko, esophula umjikelezo ngaphambi kokuba ikonsathi iqale kwaye ichithe izixhobo zentsimbi.
Abantu abaninzi baye banyathelwa emva kokuba amakhulu ehlasele ibala lezemidlalo i-NRG, etyhalela ngasemva imiqobo yokhuseleko.
Iinkonzo ezingxamisekileyo zabizwa emva kokulimala okuninzi kubikwe ngobusuku bokuvulwa kwe-Astroworld Music Festival.
Abantu abaninzi baye basiwa kwisibhedlele saseHouston, eTexas emva kokulimala.
Ii-ambulensi, abacimi bomlilo kunye nezinye iinkonzo ezingxamisekileyo zabizwa emva kokulimala okuphindaphindiweyo kwabikwa ngobusuku bokuvulwa komthendeleko womculo we-hip-hop othengiswayo e-Houston, eTexas.
Ngokutsho kwamagosa eSebe lezoMlilo eHouston, abantu abasibhozo babulawa kwaye abaninzi bonzakala kwisiphithiphithi ngexesha Umnyhadala woMculo weAstroworld.
"Sinezidumbu ezisibhozo eziqinisekisiweyo okwangoku," iNtloko yoMlilo waseHouston uSamuel Pena uxelele iintatheli, esongeza ukuba xa bebonke, abantu abangama-23 bathuthwa besuka kwindawo yexhwayelo.
“Isihlwele saqala ukuxinana sibheka phambili eqongeni, kwaye abantu baqala ukothuka,” yacacisa iNgotya.
Ividiyo kumajelo eendaba ezentlalo ibonisa abagadi be-paramedics benza i-CPR kubantu abaninzi abalele phantsi ngaphandle kweqonga, njengoko umculo ophezulu uqhubeka udlala ngasemva.
Enye ividiyo ibonisa iqela labalandeli lizama ukungena ngokukhwela phezu kocingo.
Kukwakho neengxelo zokuba abanye abantu ebebengekho ekonsathini bebebanjwe ngamapolisa emnyango.
Amatikiti e-Astroworld Music Festival ayi-100,000 athengiswe aphela kwiyure enye emva kokuthengiswa ngoMeyi. Bamalunga nama-50,000 abalandeli abaye beza kumsitho weentsuku ezimbini.
Uluhlu lomnyhadala lubandakanya iinkwenkwezi ze-hip hop uTravis Scott, uThug omncinci, uLil Baby, u-SZA, kunye nokubonakala okumangalisayo kukaDrake, phakathi kwabanye.